Madaxwayne Gaas: “Soomaaliya ma ahan Muqdisho, Muqdishona Soomaaliya ma aha!” – Radio Daljir
Madaxwayne Gaas: “Soomaaliya ma ahan Muqdisho, Muqdishona Soomaaliya ma aha!”
Abriil 26, 2018 11:37 b 1
Madaxwaynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dubai ee dalka Isutagga Imaaratka Carabta ayaa amaanay kaalinta Imaaraatka Carabta ee Soomaaliya, isagoona dhanka kale dhaliilay dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Madaxwayne Gaas ayaa sheegay dowlada Imaaraadka Carabta in ay taageero weyn ay siisay Soomaaliya, tilmaamayna in ay dalka ku sameeyey magaalgashiga ugu wayn ee Soomaaliya.
Madaxwayne Gaas ayaa sheegay in magaalada Muqdisho aysan go’aan ka gaari karin danaha Soomaaliya, Muqdisho kaligeedna aysan aheyn mid Soomaaliya oo dhan danaheeda matasha ama matali karta.
Madaxweyne Gaas waxa uu yiri, “Soomaliya ma ahan Muqdiso, Muqdishona Soomaaliya ma ahan”, isaga oo xusay in dastuurka Puntland in uu awood buuxda u siinayo dowladda Puntland in ay gasho heshiisyo caalami ah.
Dowladda Itoobiya oo ugu baaqday AMISOM inaysan kabixin Somaaliya
GAAS WAA CAADAQAATE AAN XISHOON